Iimveliso zokwazisa ezivela kwiLeaderpromos.com: Ixabiso, iNkonzo kunye neMveliso
Leaderpromos.com: Iimveliso eziNtengiso eziKhulu, iNkonzo eNkulu!
NgoLwesithathu, Matshi 9, 2011 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
Njengohambo lwam lokuya IiWebtrends Zibandakanye no-2011 inkomfa ibisondela, bendijonge intengiso ethile endiza kuyisasaza kumsitho. Njengomxhasi womsitho, enye yeendlela ezazinokukhethwa yayikukuhambisa iincwadana kwiindwendwe. Njengeshishini elincinci, ewe, olu yayilutyalo-mali endandikhathazeke kakhulu ngalo.
Ndingalulinganisa njani uhlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo, ndibengumxhasi opholileyo womsitho, ndize ndisasaze i-shwag enzulu abo bezimaseyo abanokuyixabisa kwaye bayiphendule? Ndifumene impendulo yam nge Leaderpromos.com. Hayi, kunjalo hayi iposti exhaswayo kwaye ayizukuba nayo nayiphi na indawo yokunxibelelana… ndiyakholelwa ekwaziseni ngenkonzo enkulu kunye neemveliso xa ndinikwa ithuba.
Ndigqibe kwelokuba ndithenge iincwadana zokubhala ezinkulu ezize neepeni eziya kuthi zibe nazo zonke iinkcukacha zethu zonxibelelwano kubo. Ndabayalela, ndakhawuleza ndafumana ubungqina nge-imeyile, kwaye iodolo yazaliseka yathunyelwa eSan Francisco kwiintsuku nje ezimbalwa! Kuba bendingekayiboni imveliso, bendinovalo malunga notyalo mali. Iindleko zazisengqiqweni kakhulu ngoko ndandinexhala lokuba umgangatho awuyi kuba… okanye mandundu… ngekhe bazenze ngexesha.
Njengoko ndandisiya ukuya U-CEO u-Alex Yoder emcimbini, ndadibana ne-hug enkulu kunye nombulelo ngeencwadana ezipholileyo! Kuhle!!! Ndifumene isihlalo kwaye andinakuyichaza indlela endizingcayo ngayo ukubona abantu abaninzi bethatha iincwadana, bexakana neepeni ezisebenza nge-lever, emva koko baziphatha kumcimbi lowo. Babepholile kangangokuba ndacela uWebtrends ukuba athumele izinto ezingaphezulu eofisini. Benza, kwaye sinabo namhlanje. (Enkosi Webtrends!).
Umbulelo okhethekileyo kubantu kwi Leaderpromos.com. Iincwadana zeencwadana zaphuma zintle kangangokuba ndazinika endaweni yamakhadi eshishini ashiyekileyo omsitho! (Ungayichazanga eyokuba bendingenawo amakhadi eshishini kuba umthengisi owahlukileyo ongabizwanga ngagama uye wafika emva kwexesha nabo !!!) Ukuba uyema DK New Media, qiniseka ukuthatha enye!
Ukuguqulwa, umxholo kunye neOpera Operas
Nov 14, 2011 kwi-3: 26 AM
Hlala u-Sourced, umboneleli weemveliso zentengiso, usungule uluhlu lweemveliso ze-eco-friendly ezibonisa ezinye izinto ezothusayo nezimangalisayo zokuphinda zisetyenziswe. Ukuba inkampani yakho ifuna izimvo zokuthengisa ezithengisayo kunye nokuziphatha, zininzi izinto onokuzenza: iimpuku zeempuku kunye neecasters ezivela kumavili aphindaphindiweyo, iipeni zoqalo, i-yo-yos kunye neepensile ezinokuthi zilandele ookhokho babo kwi-CD endala ethobekileyo. Mhlawumbi eyona gadget inomdla kwingqokelela yabo ye-eco-friendly yiwotshi engenabhetri, engena manzi ebangela ingxoxo enomdla phakathi kweqela apha. Kwiqela elikrelekrele, bekukho iinkcazo ezixhalabileyo zokuba le nto inokusebenza njani kwaye akukho nto sinokuyifuna kwindawo kawonkewonke. Ukuba kukho naziphi na izazinzulu, i-alchemists okanye i-voodoo-ists phaya abanokukhanyisa ngoku, nceda uphawule kwaye usikhuphe kububi bethu.